Nzira yekuwana sei visa kuIraq?
April 18, 2022 Demi Iraki, visa
Muchikamu chino, iwe uchazoziva kuti maitiro ekunyorera vhiza yeIraq. Ndezvipi zvinodiwa kuti unyore bhizinesi vhiza, visa yevashanyi? Zvinotora nguva yakareba sei kuwana iyo Iraqi kuwana, uye sei
March 25, 2022 Demi Iraki, chikoro
Sistimu yedzidzo yeIraq iri pasi pekutariswa kwehurumende yeIraq yese. Kubva kupuraimari kusvika kumadhigirii echiremba, kune dzidzo yeruzhinji yemahara. Masangano edzidzo akazvimirira aripo muIraq. Asi mari yekuenda kwavari inoita
Nzira yekuwana sei basa muIraq?
January 10, 2022 Shubham Sharma Iraki, mabasa
Iraq yakafumiswa nenhaka, vadetembi vane mukurumbira pasi rese, vapezi, uye vanyori vezvigadzirwa muArabhu. Kana iwe uri kuronga kutamira kuIraq, kutanga, iwe unofanirwa kutarisa maitiro ekunyorera vhiza yeIraq. Iri ndiro danho rekutanga; mushure
Turkey vhiza yeIraqis
August 27, 2021 Shubham Sharma Iraki, famba, Teki, visa
Inozivikanwa seRepublic of Turkey, Turkey inyika inogara pamharadzano dzeEurope neAsia. Guta rayo guru uye guta hombe, Ankara, ndiro guta hombe muTurkey. Nekuda kweizvozvo, inogovera miganhu neGreek
October 28, 2020 Demi MaIndia, Iraki, visa
Iyo Iraq Indian visa chibvumirano chinobvumidza maIndia zvizvarwa zvezvinangwa zvakasiyana kupinda munyika. Kuti upinde muIraq, nyika dzinobva kunenge nyika dzese dzinoda mvumo. Kunyange zvakadaro, nyika shomanana dzeArabhu dzine vhiza-yemahara yekupinda,
Iyo Nzira Yekutakura System muIraq
February 17, 2020 Demi tenderera, Iraki
Iyo Maitiro Yekutakura System muIraq ari nyore uye akatwasuka Mumwe anogona kuiwana kunenge kwese kupi. Iraqis inoenderana nezvatinodaidza iniaratarat1 iyo inomiririra huwandu hwehuwandu hwekuungana mumarageji, magarage makuru, uko mota dzinoenda
Zvipatara Zvakanakisa muIraq
February 13, 2020 Shubham Sharma utano, Iraki
Mumakore mashoma apfuura, Iraq yakanga yagadzira yemahara yepakati uye yepasirese hutano hutano system. Muna 1970, ivo vakatanga kushandisa chipatara-chakavakirwa uye capital-yakasimba modhi yekurapa kurapwa. Iraq, kusiyana nedzimwe nyika dzine hurombo, iyo yakanangana nehutano hwakakura
Mahotera Akanyanya Kunaka muIraq
February 12, 2020 Demi Hotels, Iraki
Irak iguta renzvimbo dzekare dzinoera, makomo anopopota uye mweya wekutora makomo. Icho chimwe cherudzi rwekutanga uko kwakatangira hupenyu. Iraq inyika yakapfuma kwazvo mairi
Yakanakisa Nguva Yekuongorora uye Kushanyira Iraq
February 11, 2020 Demi Iraki, famba
NGUVA YAKANYANYA KUKONZESESA UYE KUTI VANZVI IRAQ VAVAKURUKURA UYE VAKANYANYA, PASI PAKUTSVIRA NECHISANGO CHEMA uye NEMHAKA DZINOGARA. Kunonoka kwaMay kusvika kutanga kwaGunyana kunopisa kwazvo uye kwakaoma muIraq, tembiricha iri pamusoro pe40 ° C. At